Maamulka Gobolka Gedo oo War kasoo saaray dagaalka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maamulka Gobolka Gedo oo War kasoo saaray dagaalka
Maamulka Gobolka Gedo oo War kasoo saaray dagaalka
Iyada oo saacadihii la soo dhaafay uu dagaal Beeleed ka dhacay degaanka Bohol Garas oo hoostaga degmada Doolow ayaa waxaa dagaalka ka hadlay Maamulka Gobolka Gedo.
Guddoomiyaha Gobolka Gedo Axmed Buqulle Gareed ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya degaanka Bohol Garas inay si deg deg ah dagaalka u joojiyaan, isla markaana miiska wadahadalka wax walba ku dhameeyaan.
Guddoomiyaha oo Warbaahinta kula hadlayay degmada Garbahaareey ayaa sheegay in dagaalka dad inay ku dhintaan maahine uusan waxba soo kordhineyn, waxaana uu ugu baaqay Odayaasha Dhaqanka degmada Dooloow inay kala dhexgalaan dhinacyada dagaalamaya.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka Bohol Garas ee degmada Doolow ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada ay tahay mid degan, balse weli ay halkaasi ka taagan tahay xiisad u dhaxeeysa labada Beelood.
Next articleDHAGEYSO:- Barnaamijka Barashada Habka Haboon ee Beeraha 12-07-2021